Virus-ka zika - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Edmar Melo JC Picture
Sanad ka hor shaqaalaha caafimaadka gobolka Bahia ee waqooyiga Brazil, ayaa soo sheegay bukaankii ugu horeeyay oo dhibco guduudan jirkiisu ka soo baxeen.
Ugu horeyn shakiga, ayaa ahaa inuu yahay nooc cusub oo xanuunka dengue ah balse mar dambe, ayaa la xiqiijiyay inuu yahay virus-ka waxa yar laga ogyahay ee qaaradda Afrika ka yimid ee Zika.
Sanad kaddib markii la ogaaday, ayaa cudurka aad loogu arkay magaalada. Bilo kaddibna waxaa la ogaaday in xiriir ka dhexeeyo virus-ka iyo kororka caruurta madax yaraanta ku dhalata.
Isniintii ayey WHO ku dhawaaqday in Amerika uu ku baahay virus-ka Zika, xaalad deg deg ahna tahay.
Bishii February sanadkii tagay ayey shaqaalaha caafimaadka Bahia bilaabeen inay soo sheegeen xaalado cudurka ah. Inkastoo shakigii ugu horeeyay uu ahaa inuu yahay nooc cusub oo qandhada dengue ah. Bishii May ayey dowladu xaqiijisay inuu yahay cudurka dilaacay mid ka yimid virus-ka zika.
Kaddib markii la ogaaday kororka tirada caruurta ay daaweyneso ee ku dhashay madax yaraanta ayey Linden uga digtay saaxiibadeeda inay eegeen xaaladaha kale, waxayna bishii September ula tagtay xaaladahaasi xoghayaha caafimaadka iyadoo baaris la bilaabay.
Markii 140 kiis oo caruurta madaxa yar ku dhalatay laga helay 44 magaalo, ayey wasaaradda caafimaadka ku dhawaaqay xaalad deg deg ah.
Madaxa cudurada lakala qaado ee wasaaradda caafimaadka, Claudio Maierovitch, ayaa soo saaray digniintan: "Uur ha qaadin hadda. Tani waa waanada ugu saxan ee la bixin karo. Maalintii xigtayna waxay wasaaradda soo saartay hadal ay ku leedahay inaan lagu talineyn in dumarku uurqaadin, waxayna haweenka uurka leh u sheegeein in qof walba uu xaalkiisa kala hadlo dhakhtarkiisa.
Arrintaa kaddib ayey wasaaradda caafimaadka warisay in virus-ka zika uu yahay waxa sababay kororka caruurta madaxa yar ee waqooyi bari dalka.
Madaxweyne Dilma Rousseff, ayaa ku dhawaaqday ciidmo gaar ah iyo gole wasiiro oo leh qubaro caafimaad, kuwaasi oo go'aansada tallaabooyinka looga hortagi karo faafista virus-kan.
Dowladda Polynesia oo ah dhul ka tirsan Faransiiska, ayaa ku dhawaaqday inay baarayaan xiriirka ka dhexeeya viruska iyo xaaladaha zika
Bukaan lagu argay gobolka Texas, ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay ee qaba viruska zika ee lagu arkay Mareykanka kaddib safar latin Amerika uu ku tagay.
Colombia waxay ka dalbatay lammaanayaasha inay dib u dhigaan uurka.
Mushkiladda faafista zika, ayaa ahaa waxa ugu weyn ee looga hadlay shirka wadamada Latin Amerika iyo Caribbean-ka
Dadaal wax looga qabanayo kaneecada ayey dowladda Brazil go'aansatay, waxaana ka mid ah in xoog lagu galo guryaha aan la joogin ama meelaha aysan jirin cid laga fasax qaaxto.
WHO, ayaa ku sheegtay in faafista virus-ka zika uu xaalad deg deg ah yahay. Ururka, ayaa rajeynaya inuu fududeeyo lacag iyo wixii wax looga qaban lahaa cudurka.